Dhismooyinka taariikhiga ah ee Timbuktu ee khatarta ku sugan - BBC Somali
4 Luulyo 2012
Timbuktu sidoo kale waxay caan ku tahay maktabado badan oo ay yaalaan kumanaan qoraalo oo taariikhi ah. Qeybo badan oo ka mid ah dukumintiyadaa waxaa mudo dheer soo keydin jiray qoysaska reer Maali mudo dheer.
Machadka Axmed Baaba ee Tacliinta sare iyo Cilmibaarista Islaamiga waa meesha ugu weyn ee la dhigo buugaagta ee magaalada, waxaana yaal in ka badan 40,000 oo sheey, qaar ka mid ah waxay soo jireen ilaa qarnigii 10-aad.
Xarunta Axmed Baaba ayaa waxay isku dubaridayeen boqolaal qoraalo si ay u dhowraan aqoonta ay xambaarsan yihiin looguna soo shubo internetka. Dadka wax indha indheeya ee gudaha Maali iyo dibadaba waxay iminka ka warwarsan yihiin halka u dambeyn doonto qoraaladaas kuwaa ay kooxaha Islaamiyiinta ay ku tilmaamaan inay yihiin kuwo shareecada islaamka khilaafsan.
Inta aanay iman warbaahinta Elektrooniga ah, culuumta qadiimiga ah waxaa lagu keydin jiray looxyo sida Boubacar Sadeck loo yaqaan oo lagu yaqaan in lagu guuriyo qormooyinkii qarnigii 16-aad.
Halka ay ku taal magaalada Timbuktu ee ah kaabiga dhulka saxaha iyo meel u dhaw wabiga Niger ayaa waxay ka dhigaysaa goob istiraatiiji ah oo loo isticmaali jiray inay maraan safarada ganacsatadii xilligii hore jirtay taasoo magaalada ka dhigtay meel aan qani u ah.
Hase ahaatee markii ay reer Yurub ay gumeysteen Afrika, wadooyinkii ganacsiga ayaa waxay u weecdeen dhanka xeebta magaalada Timbuktuna khadka ayeey ka baxday. Haatan aad ayeey faqiir u tahay. Xataa markii labo sano ka hor la qaaday sawiradan dad yar oo ajnabi ah ayaa damcayay inay booqdaan goobaha halka ay qaar badana ay ka cabsi qabeen inay afduubtaan kooxaha dableyda ah ee islaamiyiinta. Taas ayaa wiiqday mid ka mid ah ilaha dakhliga ee dadka deegaanka ka heli jireen dalxiisayaasha.
Inta badan dadka degan deegaanka ayaa kasoo jeedo qabiilka Dhuwaariq, sida wiilka dhanka bixise taagan. Dhawaariiqda waxay inta badan ka caban jireen inay iska indhatirtay xukuumada Bamako.
Bartamaha Timbuktu waxaa ku yaal modulo ay reer Dhawaariq leeyihiin. Kacdoonka gooni ugoosadka ee Dhawaariq ayaa gacan ku siiyay Ansaaru Diin inay la wareegaan Waqooyiga Maali haseyeeshee labada koox ayaa isku dhacay oo xoogaga islaamiyiinta ayaa la wareegay gacan ku haynta saddexda magaalo ee ugu waa weyn dhinaca waqooyi, sida Timbuktu, Gao iyo Kidal.